Madaxweyne Muuse Biixi Iyo Xisbiga Waddani Iyamaa Tanaasul U Sameeyey In Doorashooyinku Qabsoomi Karaan?...Faallo
Sunday September 08, 2019 - 18:04:59 in News by G. Good
Hargeysa(HWN):-Doorashooyinka mudo dhaafka ah ee goleyaasha wakiilada iyo deegaanada dalka ayaa ka gudbay caqabadii ugu weynayd ee kaga imanaysay dhinaca mucaaridka.
Xukuumada iyo xisbiga ugu weyn mucaaridka ee Waddani ayaa mudo sanad iyo dheeraad ku dhaw isku khilaafsanaa guddida doorashooyinka iyo cida qabanaysa doorashada baarlamaanka iyo doorashada goleyaasha deegaanada dalka.
Khilaafka oo mudo soo jiitamayey ayaa salka ku hayey aragtiyo kala fog oo madaxweyne muuse iyo xisbiga ugu weyn mucaaridka ee Waddani ka qabeen guddida doorashada, iyada madaxweynaha somaliland uu aaminsanaa inaanu kala diri Karin guddida doorashada ee hada wakhtigeedu dhamaanayo oo uu kalsoonidii kala noqday xisbiga Waddani iyo inaan la kordhin xubnaha guddida , halka xisbiga Waddani aaminsanaa in meesha laga saaro guddidan isla markaana guddida cusub ee la soo dhisayana si siman loo qaybsado xubnaha la soo magacaabayo isla markaana xisbiyada mucaaridku ay soo magacaabaan min laba xubnood.
Mudo dheer oo uu khilaafkaasi soo jiitamayey isla markaana uu fashilmay heshiis laga gaadhay bishii July, xisbiyada mucaaridka ah ee Waddani iyo Ucid ayaa hada shaaciyey inay gaadheen is afgarad ay ku magacaabayaan labada xubnood ee uga mid noqonaya guddida doorashada ee cusub.
Hadaba Madaxweyne Muuse Biixi iyo Xisbiga Waddani Iyamaa Tanaasulay?
Madaxweyne Muuse Biixi iyo xisbiga mucaaridka ah ee Waddani waxay ahaayeen labada dhinac ee sida ugu weyn iskugu khilaafsanaa arimaha guddida doorashooyinka iyaga oo kala taagnaa mawqifyo aad u kala fog.
Ka dib fashilkii ku yimid heshiiskii uu madaxweyne Muuse Biixi saxeexay ee ay xisbiyada mucaaridka ah ka gaadheen khilaafka doorashooyinka, xisbiga Waddani waxa uu haatan u muuqdaa inuu ka tanaasulay aragtiyo uu kaga soo horjeeday madaxweyne Muuse Biixi.
Marka la eego isafgaradka ay wada gaadheen Waddani iyo Ucid waxa muuqata in hogaanka xisbiga mucaaridka ah ee Waddani ay ka tanaasuleen aragtidii ay ku doonayeen in la kordhiyo xubnaha cusub ee guddida doorashada iyaga oo haatan shaaciyey inay ogol yihiin inay soo magacaaban xubintii ay ku yeelan lahaayeen guddida cusub.
Sidoo kale xisbiga Waddani waxa uu ku guul daraystay qorshihii uu ku doonayey in la kala diro guddida doorashada ee hada joogta iyaga oo haatan dhamaysanaya wakhtigii sharcigu u ogolaa inay shaqeeyaan, taas badalkeedana waxa meelmartay aragtidii madaxweyne Muuse ee uu ka qabay guddidan doorashada ee hawlahoodu gabaabsiga ku dhaw yihiin oo ahayd inaan la kala dirin balse haddii uu xisbiga Wadani kalsoonida kala noqday ay xaq u leeyihiin inay wakhtigooda dhamaystaan.
Marka lays barbar dhigo sida ay u kala hirgaleen aragtiyihii xisbiga Waddani iyo Madaxweyne Muuse Biixi, waxaa soo baxaysa in xisbiga Waddani uu tanaasul ka sameeyey aragtiyo siyaasiya oo uu aaaminsana si ay doorashadu u dhacdo halka aanay muuqan wax tanaasul ah oo uu madaxweyne Muuse Biixi u sameeyey inay dhacdo doorashadu isaga oo ilaa hada taagan mawqifkiisii hore.
Talaabooyinka uu haatan qaaday xisbiga Waddani ayaana u muuqda kuwa suura gelin kara qabsoomida doorashooyinka wakiilada iyo deegaanada dalka dalka, isaga oo haatana ku baaqaya in la dhameeyo caqabadaha kale ee horyaala doorashooyinka, waxaana la dhawrayaa sida madaxweyne Muuse Biixi iyo xukuumadiisu uga shaqeeyaan hirgelinta doorashada isla markaana meesha uga saaraan caqabada saami qaybsiga iyo shuruucda doorashada.